Manomboka amin'ny fanaovana fikarohana sy fahatakarana ny mpanjifa hatramin'ny fanaovana bobongolo sy ny famokarana betsaka ny vokatra, dia karakarainay tsara ny fonosanao.
Fantaro ny vokatra
Ny fonosana dia mihoatra ny fiarovana ny vokatra; fantsom-pifandraisana ho an'ny marikao amin'ny mpanjifany izy io ary miasa ho toy ny fitaovam-pivarotana tsy tapaka. Mandalo ny fandalinana lalina ny vokatra izahay miaraka amin'ny client.
Ity sary ity dia natolotra ny ekipa mpamolavola anay izay manana traikefa mitambatra mandritra ny 10 taona mahery ary mahalala ny safidin'ny endrika demografika an'ny firenena maro. Hamboarina hatrany ny bobongolo. Amin'ny farany, novolavolaina lasitra santionany.
Mandrosoa ny famokarana
Ny santionany amin'ny bobongolo ny fankatoavana ny prototypa famolavolana, ny fonosana dia voasedra bebe kokoa noho ny tanjaka, ny hatsarany, ny fahombiazany ary ny fampiasana azy amin'ny farany. Manolotra fizarana betsaka ny vokatra aorian'ny famokarana koa izahay.